Bit By Bit - Fananganana fiaraha-miasa betsaka - 5.3.2 Foldit
Foldit dia lalao proteinina izay mampivelatra izay mamela ireo manam-pahaizana tsy handray anjara amin'ny fomba mahafinaritra.
Ny loka Netflix, raha mibaribary sy mazava, dia tsy maneho ny tontolon'ny tetikasa antso an-telefaona. Ohatra, ao amin'ny loka Netflix ny ankamaroan'ireo mpandray anjara matotra dia nanana fanofanana momba ny statistika sy ny fianarana milina. Fa, ny tetikasa fanokafana dia afaka mandray anjara ihany koa amin'ireo mpandray anjara izay tsy manana fampiofanana ara-dalàna, araka izay asehon'i Foldit, lalao proteinina.
Ny fitambaran-tsakafo dia ny dingan'ny asymonôma amina asidra. Amin'ny fahatakarana tsara kokoa an'io dingana io, dia afaka manamboatra proteinina amin'ny endriny manokana izay azo ampiasaina amin'ny fanafody ny biologists. Manamora kely ny proteinina dia mandroso mankany amin'ny sehatra ambany indrindra eo amin'ny angovo, rafitra iray izay mampitony ny fanosehana isan-karazany ary misintona ao anatin'ny proteinina (sary 5.7). Raha toa ka te haminavina ny endriky ny proteinina iray, dia toa tsotra izao ny vahaolana: manandrama fotsiny ny fananganana rehetra, manombana ny heriny, ary maminavina fa ny proteinina dia hiditra ao anatin'ny rafitra ambany indrindra. Mampalahelo anefa fa tsy azo atao ny manandrana ny fanovana rehetra azo atao, satria misy an'arivony tapitrisa ary mety ho an'arivony tapitrisa. Na dia amin'ireo ordinatera matanjaka indrindra aza amin'izao fotoana izao-ary ny hery azo antenaina amin'ny ho avy dia tsy mandeha fotsiny. Noho izany, ireo biôlôgy dia namolavola algorithm maro mahomby mba hikaroka tsara ny rafitra ambany indrindra. Saingy, na dia eo aza ny ezaka ara-tsiansa sy ara-toekarena goavana dia mbola tsy lavorary ireo algorithmes ireo.
Sary 5.7: Ny proteinina mihorohoro. Sary natolotry ny "DrKjaergaard" / Wikimedia Commons .
David Baker sy ny tarika mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Washington dia ampahany amin'ny fiarahamonina mpahay siansa miasa mba hamolavolana ny famolavolana ny proteinina. Tao anatin'ny tetikasa iray, Baker sy ireo mpiara-miasa dia namolavola rafitra iray izay nahafahan'ny mpilatsaka an-tsitrapo nanome fotoana tsy nampiasana ny ordinatera hanampiana ny famolavolana ny proteinina. Ho setrin'izany, ireo mpilatsaka an-tsitrapo dia afaka mijery sary mihetsika mampiseho ny fiakaran'ny proteinina izay mitranga eo amin'ny solosainy. Maro tamin'ireo mpirotsaka an-tsitrapo no nanoratra ho an'i Baker sy ireo mpiara-miasa milaza fa mieritreritra izy ireo fa afaka manatsara ny fahombiazan'ny ordinatera raha toa ka afaka mandray anjara amin'ny kaonty izy ireo. Ary dia nanomboka ny Foldit (Hand 2010) .
Ny foldit dia mampivadika ny dingan'ny proteinina izay mihodina amin'ny lalao iray izay azo tanteran'ny olona rehetra. Avy amin'ny fomba fijerin'ny mpilalao, i Foldit dia toa lasibatra (sary 5.8). Ny solon'anarana dia aseho amin'ny karazana proteinina telo-dimanjato ary afaka manatanteraka asa - "tweak", "manilika", "manavao" - izay manova ny endriny. Amin'ny fanatanterahana ireo asa ireo, ny mpilalao dia manova ny endriky ny proteinina, izay mampitombo na mitombo ny isany. Raha ny marina, ny isa dia mifototra araka ny haavon'ny angona misy ankehitriny; Ny fametrahana ambany kokoa amin'ny angovo dia miteraka avo lenta. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny tanjony dia mitarika ny mpilalao rehefa mikaroka ny famolavolana ny angovo ambany. Azo atao ihany io lalao io satria-toy ny famaritana ny sarimihetsika filôzôra ao amin'ny Netflix Prize-protein folding ihany koa ny toe-javatra izay mora kokoa ny manara-maso vahaolana fa tsy mamorona azy ireo.
Sary 5.8: Sary ivelany ho an'i Foldit. Natonta tamin'ny alalana avy amin'ny http://www.fold.it.
Ny fàfana mahafinaritra an'i Foldit dia ahafahan'ny mpilalao manana fahalalana kely momba ny bio-chemistry mba hifaninana amin'ireo algorithm tsara indrindra noforonin'ny manam-pahaizana. Na dia tsy dia tsara loatra aza ny ankamaroan'ny mpilalao ao amin'ilay tetikasa, misy mpilalao marobe vitsivitsy sy ekipa kely mpilalao mahafinaritra. Raha ny marina, ny fifaninanana eo amin'ny lohan'ny diplaoma eo amin'ny mpilalao Foldit sy ny algorithms amin'ny toetr'andro dia namorona vahaolana tsara ho an'ny 5 amin'ny 10 proteins (Cooper et al. 2010) .
Foldit sy ny loka Netflix dia samihafa amin'ny fomba maro, saingy samy mandray anjara antso ho amin'ny vahaolana izay mora takarina amin'ny famokarana. Ankehitriny, hitovy amin'ny rafitra iray hafa ihany koa ny rafitra hafa: lalàna lalàna. Ity ohatra farany iray amin'ny olan'ny antso an-kalamanjana ity dia mampiseho fa ity fomba ity ihany koa dia azo ampiasaina amin'ny sehatra izay tsy azo ampiharina amin'ny fitomboana.